विशेष – Page4– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:२८ English
तिहारको भाइटीकाको उत्तम साइत ११ बजेर ३७ मिनेटमा २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १०:४३
भारत सरकारद्वारा नेपाललाई २८ वटा भेन्टिलेटर सहयोग २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:०५
काठमाडौ । भारत सरकारले नेपाललाई भेन्टिलेर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच भारतले २८ वटा भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्दै..
अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुन् ? २३ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:४४
न्यूयोर्क । जो बाइडन संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएका छन् । ७८ वर्षिय बाइडेन नोभम्बर ३ मा भएको निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन् । जो बाइडेनको जन्म सन् १९४२ नोभेम्बर २० मा पेन्सलभेनियाको स्क्रान्टनमा भएको थियो..
संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन बाबुराम भट्टराईको माग २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १५:२०
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । आज ट्वीट गर्दै उनले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो उसैले छिनोफानो गरे पनि हालका लागि गम्भीर देखिएका विषयमा संसद अधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने..
अमेरिका चुनाव : बाइडेनको अग्रता, नतिजा नआउँदै विजेता घोषित नगर्न ट्रम्पको चेतावनी २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:५८
न्यूयोर्क । अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपतिका लागि रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको अन्तिम नतिजा आउनुअघि नै आफूलाई विजेता घोषित नगर्न चेतावनी दिएका छन् । ट्वीट गर्दै प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिमा गलत दाबी नगर्न..
नेकपा सचिवालयको अनौपचारीक बैठक: सामूहिकरुपमा भेटेर बैठक बोलाउन ओलीलाई आह्वान गर्ने २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १८:०७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले औपचारीक बैठकका बोलाउनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको एकल आह्वानको बैशठकमा सहभागि ५ जना सचिवालय सदस्यको नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको अनौपचारिक..
कांग्रेसका थप ६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १२:१८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका थप छ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबार केन्द्रीय सदस्य, पार्टी कार्यालयका कर्मचारीलगायत ८२ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ६ जना केन्द्रीय सदस्यमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, श्याम घिमिरे,..
निःशुल्क उपचार गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १६:३४
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब पिसिआर परीक्षण..
अस्पतालले उपचार नगरेपछि संक्रमित महिलाद्वारा आत्महत्या २० कार्तिक २०७७, बिहीबार ११:५३
मोरङ । आर्थिक पाटो कमजोर देखेर अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि मोरङमा एक कोरोना संक्रमित महिलाले आत्महत्या गरेकी छिन् । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका १० की ४५ वर्षीय महिलाले आत्महत्या गरेकी हुन् । नियमित डायलाइसिसका क्रममा कोरोना संक्रमण पनि पुष्टि भएपछि विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण..
मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादितिर जान दिनु हो : प्रधानमन्त्री १९ कार्तिक २०७७, बुधबार १५:१२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार बिहान चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुनैपनि परिस्थितिमा आफुले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । पछिल्लो समय पार्टी..
पूर्वसभामुख महरालाई पत्नी शोक १९ कार्तिक २०७७, बुधबार ११:४६
काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई पत्नी शोक परेको छ । उहाँकी पत्नी सीताको उपचारका क्रममा आज बिहान थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो । १० वर्षदेखि माइस्थेनिया रोगबाट पीडित महरालाई पछिल्लो समय श्वासप्रश्वास र निमोनियाको समस्या देखिएपछि..
उद्योग वाणिज्य महासंघमा ढकाल समूहको उम्मेदवारी दर्ता, ढकाल समूहमा को–को ? १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:०८
काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । मंगलबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकूमा ढकालसहित उहाको प्यानलका सबै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उम्मेदवारी..
भियना आक्रमणमा पाँचको मृत्यु, १५ जना घाइते १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १४:५२
भियना । अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा स्थानीय समय अनुसार सोमबार भएका विभिन्न आतङ्कवादी आक्रमणमा पाँचको मृत्यु भएको यहाँको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । उक्त घटनामा कम्तीमा १५ जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ । विभिन्न स्थानमा भएका आतङ्ककारी हमलामा ईस्लामिक समूहले आक्रमण गरेको..
एक करोड हुण्डीसहित ३ जना पक्राउ १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:४४
काठमाडौँ । प्रहरीले तीन जना हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले एक करोड रुपैयाँसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो । सिआइबीका प्रमुख डिआइजी सहकुल थापाका अनुसार काठमाडौंको ओमबहालबाट झापाका विकास मित्तल र कमल मित्तल तथा पर्वतका गणेश पौडेललाई पक्राउ..
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन भोलि मंगलबार १७ कार्तिक २०७७, सोमबार १४:०५
न्यूयोर्क । अमेरिकाको राष्ट्रपति को हुने भन्ने फैसला एक दिनपछि हुनेछ । निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट जो बाइडन चुनावी मैदानमा छन् । नोभेम्बर ३ मा अर्थात कात्तिक १८ गते मंगलबार हुने निर्वाचनले समग्र विश्वको ध्यान केन्द्रित..
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन तयारी र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीका साथै केही केन्द्रीय सदस्यसमेत सहभागी हुने कांग्रेस..